राष्ट्रपति भन्डारीकी ७६ वर्षिया आमा वृद्धाश्रममा, छोरी देशको प्रमुख हुँदा-हुदै आखिर किन आमालाई वृद्धाश्रममा बस्नु पर्ने भयो त ? यस्तो छ वास्तविकता [भिडियो सहित] - pnpkhabar.com
You are at:Home»भिडियो»राष्ट्रपति भन्डारीकी ७६ वर्षिया आमा वृद्धाश्रममा, छोरी देशको प्रमुख हुँदा-हुदै आखिर किन आमालाई वृद्धाश्रममा बस्नु पर्ने भयो त ? यस्तो छ वास्तविकता [भिडियो सहित]
राष्ट्रपति भन्डारीकी ७६ वर्षिया आमा वृद्धाश्रममा, छोरी देशको प्रमुख हुँदा-हुदै आखिर किन आमालाई वृद्धाश्रममा बस्नु पर्ने भयो त ? यस्तो छ वास्तविकता [भिडियो सहित]
By शर्मिला गुरुङ on २६ चैत्र २०७४, सोमबार ०६:२७ भिडियो
काठमाडौँ, २६ चैत : सामाजिक सञ्जालमा एक पत्रकारले राष्ट्रपतिकि आमालाई वृद्धाश्रममा भेटेको भन्दै राष्ट्रपतिकी आमासँग लिइएको फोटो अपलोड गरेका छन् । उक्त फोटोमा कमेन्ट गर्दै धेरै जनाले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
राष्ट्रपतिकि आमाले कहाँ के गर्छिन ? अरु परिवारले के गर्छ ? भन्ने कुरा धेरैको चासोको विषय हुन सक्छ । यो जिज्ञासा सामान्य नै हो तर केहीलाई भने राष्ट्रपति आँफु चाहिँ शितल निवासमा रानी झैँ भएर बसेको अनि जन्म दिने आमालाई चाहिँ वृद्धाश्रममा भन्ने लागेको छ।
आखिर किन देशको प्रमुख छोरी हुँदा-हुदै पनि आमालाई वृद्धाश्रममा बस्नु पर्ने भयो त ? के उनलाई हेर्ने कोही नभए र वृद्धाश्रममा बस्नु परेको हो ?
यस्तो रहेछ वास्तविकता हेर्नुहोस् भिडियोमा :